Dad badan oo lagu soo ogaaday Meher been abuur ah. | WWW.SOMALILAND.NO
Dad badan oo lagu soo ogaaday Meher been abuur ah.
Posted on Abriil 4, 2008 by Weriye2
Xafiiska socdaalka ee Norway (UDI) ayaa u diiday dadbadan inay keenaan dumarki ama ragii ay guursadeen. Waxaana looga shakisan yahay inuu meherkoodu dadkan ben been yahay.
Dadka guurka isku keenaya ee ka imanaaya wadamada Europta si hawlyar ayaa xafiiska socaalku Norway u ogoladaa. Wadama sida Afganistan, Irak ,Marooko iyo Somalia dadka reerhooda ka keenaya sigaar ah ayaa arimahooda loo eegaa.
Sanadkii hore ee 2007 waxaa ladiiday codsiyo gaadhayaa ilaa 150. Tani waxay noqonaysaa diidmadii ugu badnayd marka loo eego sanadihii kan ka horeeyay. Waxaana laga shakisan yahay inay dadkaasi been abuur sameeyaan, oo anay dhab ka hayn isqabtaankoodu.
Sanadkii 2006 ayaa xukuumadu u gudbisay xafiiska socdaalka sharci cusub oo ka hortagaaya guurka beenta ah ee laysku keeno. Sharcigan cusub ayaa keenay in aad codsikasta loogu fiirsado oo kii laga yara shakiyo codsigiisa la diido.
« CUDUR-DAAR JACEYL “Qeybtii Afaraad” Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Sabti, 05 April »